Archive du 20180629
Mpitari-tolon’ny 13 mey Tambazam-bola sy fahefana fa tsy manaiky
Matoa isika nijanona eto amin’ny 13 mey dia tsy mbola vita ny tolona, hoy ny depiote Hanitra Razafimanantsoa omaly.
Jean Jacques Ratsietison Kandida ho filoham-pirenena ihany koa
Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny Hotely Le pave Antaninarenina omaly fa ny filoha mpanorina ny antoko politika Fahefa-Mividy izao no Ilain’ny Malagasy (FMI Ma), Jean Jacques Ratsietison, ihany ho kandida atolotry ny antoko amin’ny fifidianana ho filoham-pirenena amin’ity taona ity.
Ho famotehana an-dRavalomanana Hampirisihana mafy hihavana Rajao sy Rajoelina
Mivoaka tsikelikely ny feo, fa misy ny vondron’olona Frantsay sy karana mikotrika sy mandrisika mafy an-dRajaonarimampianina sy Rajoelina hifanohana mafy handavoana an-dRavalomanana.
Praiminisitra Ntsay Christian Haverina ho « plaque rouge » avokoa ny fiaram-panjakana
Haverina ho « plaque rouge » avokoa ny fiaram-panjakana rehetra eto amintsika, hoy ny praiminisitra Ntsay Christian omaly teny amin’ny Lapan’i Tsimbazaza, tamin’ny fotoana nanolorany ny fandaharan’asa momba ny fanohizana ny fampiharana ny PGE na Politika ankapoben’ny Fanjakana teo anatrehan’ireo solombavambahoakan’i
Paul Rabary Mampisongadin-tena fa ho kandida ?
Miendrika ho propagandy ny ataon`i Paul Rabary, izay minisitry ny fanabeazam-pirenena teo aloha, raha tarafina amin’ny fihetsiny sy fitakosonana amin`ny tantsaha sy ny mpianatra raha ny hita eo anivon`ny tambajotra serasera.
Sendikan’ny mpiasan’ny MPTDN “Tsy mila minisitra efa ratsy laza izahay”
Mitohy ny grevy ataon’ny sendikan’ny mpiasan’ny minisiteran’ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny haitao ara-kajy mirindra (MPTDN) eny Antaninarenina izay efa naharitra 2 herinandro izao.
Digy mihazo an’Ivato Lasa toerana fanahazan-damba
Lasa feno lamba avy sasana miahy eny amin’ny digy mihazo an’Ivato amin’izao.
Hetraketraka atao amin’ny QMM Tolagnaro Olona 4 nampidirina am-ponja vonjimaika
Naiditra am-ponja vonjimaika omaly hariva ny 4 amin’ireo mpitarika grevy sy mpanao barazy eny amin’ny lalana mankany Mandena misy ny ozinina noho ny fitoriana nataon'i QMM mivantana teny amin'ny manampahefana.
Mondial 2018 Miala sasatra kely anio zoma ireo mpifaninana
Nisongadina omaly alakamisy 28 jona ny fihintsanan’ny solontena Afrikana farany dia i Sénégal izay lavon’i Colombie 1-0 tao amin’ny vondrona H teo amin’ny andro faha-15 farany amin’ny fifanintsanam-bondrona.
Tanana zatra mitsotra
Sarotra ny miala amin’ny mahazatra, hoy ilay fomba fiteny izay. Na ho tonontononona sy takitakiana isan’andro aza ity atao hoe fiovana dia toa samy manana ny petra-keviny avy mikasika izay antsoina hoe fiovana izay ny rehetra.
Tetezana mampifandray an’Ankadivato sy Ampahibe Hotapahana manomboka amin’ny jolay
Hita ho efa somary tranainy ihany ny tetezana mampitohy an’Ankadivato sy Ampahibe na ilay eo amin’ny antsoina hoe Vallée de l’Est iny, raha ny fanazavan’ny tale misahana ny fitaterana eo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra, Landy Raveloson.
Minisitra Beboarimisa Ralava Efa nojerena ny « déblocage » ny vola ho an’ny mpitatitra
Nisy fifandaminana nifanarahana tamin’ireo mpitatitra fa hatsahatra nanomboka omaly alakamisy 28 jona ny fitokonana nataon’izy ireo, hoy ny minisitry ny fitaterana sy famantarana ny toetrandro, Beboarimisa Ralava, fa efa nojerena ny « déblocage » ny vola fanampiana fanome azy ireo.
ECCOVA Hanampy ny tanora amin’ny fitadiavana asa
Anisan’ny olana sedrain’ny tanora maro manerana ny Nosy ny tsy fahitana asa, eny fa na dia ho an’ireo nahavita fianarana aza.
Oniversiten’Antananarivo Niara-nitokona avokoa ny mpianatra, mpampianatra, mpandraharaha
Niara-nitokona nanomboka omaly ireo mpianatra, mpampianatra, mpandraharaha, mpampianatra mpikaroka eny amin’ny anjerimanontolo.
Mpanendaka eto Antananarivo Nahavitan’ny MIP horonantsary vaovao
Hivoaka manomboka anio zoma 29 jona etsy amin’ny Plaza Ampefiloha ilay horonantsary mitondra ny lohateny hoe : “Mpanendaka” novokarin’ny Madagascar Island Pictures ( MIP).
BREZILIANA NIDOBOKA ENY ANTANIMORA
Nidoboka eny Antanimora rehefa natolotra ny fampanoavana omaly ilay breziliana vavy. Raha tsiahivina fohy dia nanafina rongony mahery vaika tao anatin'ny kibony io farany avy amin'ny fitelemana an'izany. Voaporofo tanteraka izany fa toerana fandalovan'ny zava-mahadomelina iraisam-pirenena i Madagasikara
Tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara Misy akony ratsy amin’ny toekarena
Nampahafantarina tamin’ny alarobia teo tetsy amin’ny Ofisy Nasionalin’ny Fanjarian-tsakafo (ONN) Anosy ny fisian’ny andro iraisam-pirenen’ny fanjarian-tsakafo ny 6 sy 7 jolay ho avy izao.
PGE teny Tsimbazaza Ny hevitr’ireo depiote
Depiote Randriamahefa Henri Charles Tsara ilay fanolorana ny PGE nataon’ny praiminisitra Ntsay Christian teo, hoy ny depiote Randriamahefa Henri Charles voafidy tany Moramanga, fa tokony hataony izay hahitana vola hanatanterahana ny fifidianana.
RGPH-3 Afaka efa-bolana ny fanisana vonjimaika
Ny 95%-n`ny fanisana ankapoben`ny mponina sy ny toeram-ponenana (RGPH-3) no vita hatramin`ny omaly.